nederlandy - Synonyms of nederlandy | Antonyms of nederlandy | Definition of nederlandy | Example of nederlandy | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for nederlandy
Top 30 analogous words or synonyms for nederlandy
Nederlandy Nisy ireo tamin'ny vahoaka no nilaza fa be loatra ny fahefan'ny mpanjaka. Tia hampihena ny fahefany izy ireo, ka izy ihany no mifidy ny governemantany. Tamn'ny 1848 , dia nisy ireo rotaka lehibe manohitra ny mpanjaka eraky ny firenena eoropeanina. Natahotra izany hitranga ao Nederlandy ny mpanjaka. Ka nanome alalana ana'i Hohan Rudolf Thorbecke hanoratra lalàm-panorenana ny mpanjaka. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia afaka mifidy ny vahoaka. Tamin'ny fiandohany dia ny manan-karena ihany no afaka mandatsa-bato. Nanomboka tamin'ny 1919 dia afaka manatrika fifidianana avokoa ny olon-drehetra.
Nederlandy Tamin'ny 1648 ny Nederlandy sy Espaina no nanao sonia soa aman-tsara. Ny mponina nerlandey dia navela hitandrina ny toerana rehetra nosamboriny. Ny ampahany Holandy izay tsy resin'ny Holandey dia nijanona tamin'ny Espaina. Taty aoriana dia anjaran'i Belzika izay ampahan-tany tsy azon'ny Holandy izay.
Nederlandy Tamin'ny Ady Lehibe Voalohany dia tsy niady ny Nederlandy. Tia nijanona ho tsy mpanatrika ady ihany koa ny Nederlandy tamin'ny Ady lehibe faharoa, fa voatafiky ny Alemanina ny firenena tamin'ny 1940. Sahala ny tany amin'ireo firenena voatafik'i Alemaina dia namono jiosy ny Antoko Sôsialista Nasionaly Alemanina. Vehivavy jiosy niaina tany Nederlandy i Anne Frank. Niafina tamin'ny Nazi ny fianankaviany sy izy ary nanoratra diary izy. Maty tany amin'ny toby fitanàna Nazi izy ary nalaza ny diariny.
Nederlandy Nanafaka ny faritra atsimon'i Nederlandy ireo tafika amerikanina kanadianina, poloney ary britanika tamin'ny 1944. Tia hiampita ny Rhin zareo araka ny Operation market Garden izay hanafahana ny ampaha sisan'ny firenena, saingy resy. Tamin'ny volana Mey 1945 ny firenena vao afaka. Nandritry ny dimy taona nanjanahan'ny Alemanina an'i Nederlandy dia eo amin'ny olona dimy alina sy roa hetsy teo ho eo no naty tao Nederlandy.
Nederlandy Raha ny marina, ny ankamaroan'ny Nederlandy dia noforonin'ny fasika izay tonga avy any amin'ny renirano maro mikoriana eo amin'ny tanim-pirenena. Zavatra niavaka renirano ny Rhin, ny Maas, ny IJssel sy ny Scelt. Ny ampahany lehibe Nederlandy dia ambanin'ny haavon'ny ranomasina. Ny anton'izany dia satria ny Holandey dia nanamaina farihy sy ny faritra maro any an-dranomasina, amin'ny alalan'ny famoronana polders. Ary noho izany dia misy ny hoe "Andriamanitra no namorona ny tany, fa ny Holandey namorona ny Nederlandy." Izany no mahatonga ny Nederlandy tena fisaka. Ao ny tena atsimo-atsinanan'ny Nederlandy, tao Limburg, misy havoana. Noho izany, amin'io faritra io dia mpizahantany holandey maro. Ny avo indrindra any amin'ny Eoropeana anjara Nederlandy, ny Vaalserberg, dia 323 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Ny avo indrindra any Nederlandy na mety sy ny Fanjakan'ny Nederlandy ny tendrombohitra Scenery, teo amin'ny nosy Karaiba Saba, amin'ny 887 metatra.
Nederlandy Rehefa tapitra ny ny Taona Afovoany ny loham-pirenena tamin'ny Bourgogne, firenena izay lasa anisan'ny Frantsa, miray saina faritra fito ambin'ny folo. Ireo faritra nantsoina hoe ny Nederlandy. Ary rehefa nanambady an'i Maximilian I, Mpanjaka Romanina Masina, ny zanakavavin'ny dioka, dia lasa anisan'ny Espaina i Nederlandy. Tamin'ny taonjato faha-16 dia lasa Protestanta ny olona maro. Tsy tia izany ny mpanjakan'i Espaina, tiany hijanona Katolika ny nerlandey rehetra. Nanapa-kevitra ny hamono ny protestanta avokoa izy. Mazava ho azy fa tsy tia izany ny Holandey, ary tamin'ny 1568 dia nanomboka ny ady tamin'i Espaina. Ilay ady dia naharitra hatramin'ny 1648, noho izany dia antsoina hoe ny Adin'ny valopolo taona. Mpitondra lehiben'ny nerlandey tamin'izany ady izany i Willem van Oranje.
Nederlandy Rehefa nahaleo tena ny Nederlandy, dia tena manokana firenena. Nentim-panjaka avokoa ny firenena rehetra tao Eoropa, fa Repoblika izy. Faritany fito no hita ato amin'i Nederlandy, izay entin'ny tanàn-dehibe. Ireo tanàn-dehibe ireo dia entin'olom-pirenena manan-karena. Entin'ny mpitondra faritany izay manam-pahefana be ireo tanàna ireo, fa na dia izany aza kely ny fahefan'izy ireo raha oharina amin'ny mpanjakan'ny firenena eoropeanina hafa.
Nederlandy Ity no lisitry ny tanàna ahitana isam-ponina mahery ny iray hetsy
Nederlandy Ny mpanjaka no mitondra ny firnena, izay mpanjaka Willem-Alexander. Raha araka ny lalàm-panorenana dia voafehy ny fahefana. Araka ny lalàna, dia zon'ny mpanjaka no ampahafantarina ary anontaniana amin'ny raharahan-governemanta. Araka ny fifanarahan'ny mpanjaka ary ny minisitra, dia mety manam-pianjadiana ary fahefana betsaka noho ny nomen'ny lalàm-panorenana ny mpanjaka.
Nederlandy Ny Nederlandy dia firenena any Eoropa Andrefana. Mihoatra ny 17 tapitrisa ny olona miaina ao. Ho any avaratra sy andrefan'ny Nederlandy dia ny Ranomasina Avaratra. Ny any atsinanana dia ny Alemaina ary any atsimo dia Belzika. Ny Nederandy dia iray amin'ireo firenena izay nanomboka ny Vondrona Eoropeana. Olona izay miaina any Nederlandy dia antsoina hoe "Anarana". Ny fitenin'ny Nederlandy antsoina koa hoe Holandey. Ny tena renivohitry ny Nederlandy dia Amsterdam. Izany anefa, dia tsy ny toerana izay misy ny governemanta mipetraka. Amin'ny Antenimeram-Pirenena (ao amin'ny fiteny nerlandey: 'Tweede Kamer') dia any La Haye.